သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဂီတသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုတစ်ခုဖြင့်စီဒီတစ်ချပ်ကိုမည်သို့ကူးယူရမည်နည်း Gadget သတင်း
သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တေးဂီတ (သို့) ဗွီဒီယိုတစ်ခုဖြင့်စီဒီတစ်ချပ်ကိုဘယ်လို burn မလဲ
Paco L ကို Gutierrez | | ယေဘုယျ, ရုပ်ပုံနှင့်အသံ, Software များ
ကျနော်တို့ပြီးသားတစ် ဦး အတွက်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း နည်းပညာလမ်းညွှန်များအတွက်ဆောင်းပါး ငါတို့ပြသတဲ့နေရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂီတစီဒီများကို MP3 ပြောင်းရန်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းသေဆုံးနေသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပါဝင်မှုသည် discs များအတွက်အထောက်အကူပြုသည့်ကိရိယာများကိုရှာဖွေရန် ပို၍ ခက်ခဲလာသည်။ ဒီလောက်များများစားစား၊ ကားတစ်စီးနီးပါးမှာ disk support မပါရှိသည့်အပြင်လက်တော့ပ်များလည်းထိုနည်းတူပင်။
Netflix, Spotify သို့မဟုတ် Amazon Prime စသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဂီတနှင့်ဗီဒီယို ၀ န်ဆောင်မှုများပါ ၀ င်သော streaming သို့မဟုတ် on-demand အကြောင်းအရာများကိုစျေးကွက်ကညွှန်ပြသည်။ ဗီဒီယိုဒါမှမဟုတ်ဂီတကိုဒစ်ဂျစ်တယ်သီချင်းတွေသုံးချင်တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဆိုရင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဤအရာများကိုရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်သင့်တော်သောအစီအစဉ်များစွာရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ disc burner ပါသည့်သို့မဟုတ်ပြင်ပကွန်ပျူတာကိုဝယ်ရန်သာလိုပါသည်။
2 Windows တွင် discs များကိုကူးယူရန်ပရိုဂရမ်များ
2.2 အယ်လ်ကိုဟော 120%
2.4 DAEMON Tools များ Lite ကို
3 macOS မှာ discs တွေကိုကူးဖို့အစီအစဉ်များ
၎င်းသည်မေ့ပျောက်သောအနုပညာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်၊ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာတွင်မီးရှို့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အလွတ်ပြားများ ၀ န်းရံလျက်နေထိုင်ကြသည်။ ဒါအများကြီး မည်သည့်စတိုးဆိုင်မည်မျှပင်သေးငယ်ပါစေ ၀ ယ်ရန်အတွက်မှတ်တမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်; ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း streaming နှင့် on-demand ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ဤအရာအားလုံးကိုနောက်ခံထားရှိသည်။
ဒါတောင်မှကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ပျော်မွေ့ချင်ပေမယ့်မူရင်းယူနန်ပြည်နယ်ကိုယင်း၏သေတ္တာထဲ၌ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဂီတ discs များသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်များကိုလုံခြုံစေရန်အခြားရွေးချယ်စရာရှိသည်မဟုတ်ပါ။ ကောင်းပြီ ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ကစားသမားတစ် ဦး အားခွင့်မပြုသည့်နေရာများသို့ပို့ဆောင်လိုသောပရိုဂရမ်များသို့မဟုတ်တင်ပြချက်များ (ပို။ ပို။ ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာတစ်ခုခု) ။ CD, DVD သို့မဟုတ် BLU-RAY တွင်မည်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားကိုမဆိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ပရိုဂရမ်အမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသွားပါမည်။
Windows တွင် discs များကိုကူးယူရန်ပရိုဂရမ်များ
၎င်းသည်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးသောပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တိုတောင်းသော interface နှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအတော်လေးခေတ်ကုန်သွားသော်လည်းအလွန်အလိုလိုသိပြီးရိုးရှင်းသည်။ ဒီပရိုဂရမ်ကကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးနိုင်သမျှမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်မည်သည့်ပုံစံနှင့်မဆိုအကောင်းဆုံးကိုမည်သည့်ပုံစံကမဆိုအခမဲ့ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်မည်သည့် Windows အမျိုးအစားမဆို Windows 95 မှနောက်ဆုံးပေါ် Windows 10 အထိအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားခံကိုမဆိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်၊ XBOX 360 (HD DVD) အသုံးပြုသောပုံမှန်မဟုတ်သောပုံစံပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် disc ကိုတစ်ခါတစ်ရံမီးရှို့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ မည်သည့်စာဖတ်သူတွင်မဆို 100% ဖတ်နိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်ဆော့ဝဲလ်မှတစ်ဆင့်စစ်ဆေးပါ။ ကျနော်တို့ကြားခံ၏အရွယ်အစားကိုပြုပြင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ disk ကို encrypt နိုင်ပါတယ်။
ဤသည်၌ LINK ကျနော်တို့ပရိုဂရမ်ကို download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
virtual drive ကိုဖန်တီးရန်သို့မဟုတ်ပုံတူကူးခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်၍ အစီအစဉ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မရေမတွက်နိုင်သော formats များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ mds, ISO, bwt, b5t, b6t, ccd, isz ... ။ ၎င်းသည်စိတ်ထဲပေါ်ပေါက်လာသည့်အရာမှန်သမျှ၏မိတ္တူပွားများဖန်တီးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်တော်တို့ Windows ကို install လုပ်ဖို့စီဒီတစ်ချပ်လိုတယ်။ ဒီပရိုဂရမ်နဲ့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
Alcohol 120% နှင့်အတူ disk ပုံတူပွားခြင်းအားလုံးသည်ရိုးရှင်းသောအဆင့်အနည်းငယ်သာဖြစ်သည် ရိုးရှင်းတဲ့ interface ကို မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုသူမည်မျှအတွေ့အကြုံရှိပါစေလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဤသည်၌ LINK ဒါကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလို့ရတယ်။
ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သောစနစ်တကျစီစဉ်ထားသော interface တစ်ခုပါ ၀ င်သောဟောင်းနွမ်းသောဟောင်းနွမ်းသောပရိုဂရမ်တစ်ခုသည်အလွန်ရိုးရှင်းသော၊ မည်သည့်ဘာသာစကားမဆိုရရှိနိုင် ဒါကြောင့်ဘာသာစကားဟာအသုံးပြုသူတိုင်းအတွက်ပြaနာမရှိပါဘူး။ အဆိုပါအစီအစဉ်သည်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အာရုံစူးစိုက်သည် MP3, AAC, WAV, FLAC (သို့) ALAC.
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်မှာဖိုင်များကို Pen drive တစ်ခုကဲ့သို့ကူးယူရုံသာဖြစ်သည်။ ဒီအရာအားလုံးကိုစီဒီများနဲ့ဒီဗီဒီနှစ်ခုစလုံးနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ 2000, XP မှ Windows 10 အထိ Windows ၏မူကွဲအားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပေါင်းစည်းထားသောကစားသမားတစ်ခုရှိသော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးချမည်မဟုတ်ကြောင်းသံသယမရှိဘဲရှိခဲ့သည်။
DAEMON Tools များ Lite ကို
၎င်းသည်အကောင်းဆုံးသောအစီအစဉ်ဖြစ်သည် "တီထွင်သူများ" အကြောင်းအရာ။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာအသံသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများအတွက် discs များကိုကူးယူရန်မဟုတ်ပါ ၎င်းသည် ISO ကဲ့သို့သောပုံရိပ်ဖန်တီးမှုကိုအာရုံစိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယခုအထိတင်ပြခဲ့သည့်သူများအနက်၎င်းသည်ခေတ်မီသော interface ကိုနှစ်သက်သည်မှာသေချာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စာရင်းတစ်ခုလုံးကိုပင်ပြောလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအလိုလိုသိပြီးရိုးရှင်းပါသည်။
ဒီပရိုဂရမ်ကဆိုကြပါစို့ DVD နှင့် BLU-RAY တွင်ဗွီဒီယိုဂိမ်းများသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်များကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ လိုအပ်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအခန်းကန့်များစွာ၌လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည် အခမဲ့ဗားရှင်းတွင်ကြော်ငြာပါဝင်သည်ဒါပေမယ့်အိတ်ကပ်ထဲကပိုက်ဆံမပေးချင်ရင်ပေးရတဲ့စျေးနှုန်းက ကျနော်တို့ကိုဝယ်ခြင်းငှါထို option ရှိသည်ပေမယ့် သာ€ 4,99 များအတွက်န့်အသတ်သက်တမ်းလိုင်စင်ကွန်ပျူတာသုံးခုအထိတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
ဒီပရိုဂရမ်ကိုငါတို့ download လုပ်နိုင်ပါတယ် LINK.
ဟုတ်ပါတယ်၊ Windows ကိုတပ်ဆင်ထားရင်ငါတို့ကွန်ပျူတာမှာဘာမှထည့်စရာမလိုဘဲတေးဂီတ disc ကိုကူးနိုင်တယ်။ Windows XP ကနေ 10 အထိ၎င်းသည် ၀ င်းဒိုးမီဒီယာပလေယာနှင့်ပါ ၀ င်သည့်အသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်ဖြစ်သည်
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထူးဆန်းသောဂီတစီဒီကိုသာပုံမှန်ကြိုတင်မှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သူများအတွက်၎င်းသည်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အကန့်အသတ်ရှိသဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုခဲယဉ်းသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်းမိတ္တူ၏အရည်အသွေးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ အကောင်းဆုံးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထပ်မံတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဒေါင်းလုပ်ချခြင်းများပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
macOS မှာ discs တွေကိုကူးဖို့အစီအစဉ်များ
ပန်းသီးထုတ်ကုန်ကိုသုံးတဲ့ငါတို့မှာလည်းကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် disc တွေကိုမီးရှို့ပစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာ macOS operating system မှာလုပ်ဖို့အခြားနည်းလမ်းတွေလည်းပေးမယ်။ မျိုးကွဲများသည်ကျယ်ပြန့်မှုနည်းသော်လည်း၊ Windows ရှိကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောရွေးချယ်စရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ခံစားနိုင်သည်။
ငါ့အတွက်ဘာမှစတာမဟုတ်ဘူး အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု; ၎င်း၏အမည်ကညွှန်ပြသည့်အတိုင်း၎င်း၏အမြန်နှုန်းကိုရည်ညွှန်းသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျမ်းမျှထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖြင့် discs များကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုအာမခံရန်အတွက်၎င်းတို့ကိုအနိမ့်အမြန်နှုန်းဖြင့်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည် ဖြစ်နိုင်ပါ။
ကျနော်တို့စာရင်းတစ်ခုလုံး၏အပြည့်စုံဆုံး application များထဲမှရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဗီဒီယိုကို AVI (သို့) MPG မှာကူးယူနိုင်တယ်။ DVD စာကြည့်တိုက်များကိုဖန်တီးပြီးစီမံခန့်ခွဲပါ။ လမ်းညွှန်မီနူးအတွက်တင်းပလိတ်များကိုပြုပြင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်တမ်းများတွင်ရေစာအမှတ်အသားများကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်၊ PAL သို့မဟုတ် NTSC တွင်ဗွီဒီယိုဖိုင်များကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့်အပြင်မြင်ကွင်းကျယ်ဖန်သားပြင်များအတွက်ရှုထောင့်အချိုးအစားကိုလည်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏အမည်အရရိုးရှင်းပါသည်။ စီဒီနှင့်ဒီဗီဒီနှစ်ခုလုံးကိုမီးရှို့ပါ။ မည်သည့် operating system မဆိုလည်ပတ်သည် Catalina ၌ရှိသကဲ့သို့ MacOS X ကို။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား archive discs များ၊ music discs များကိုကူးယူရန်၊
၎င်းသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ရိုးရှင်းသောသဘောသဘာဝအရဖော်ရွေသည့် interface ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဆော့ဗ်ဝဲမှာတွေ့ရတဲ့တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကတော့ DVD တခုခုကိုမီးရှို့တဲ့အခါ၊ ဗွီဒီယိုဖိုင် .mpg ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ပရိုဂရမ်သည်ဖိုင်များကို .mpg သို့အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲပေးသည့်အတွက်၎င်းသည်ကြီးမားသောပြproblemနာမဟုတ်ပါ။ ဒီအဘို့ငါတို့ပေမယ့်ပြောင်းလဲခြင်းမှတ်တမ်းတင်မတိုင်မီထွက်သယ်ဆောင်နေစဉ်ခဏစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တေးဂီတ (သို့) ဗွီဒီယိုတစ်ခုဖြင့်စီဒီတစ်ချပ်ကိုဘယ်လို burn မလဲ
ဘာကြောင့် Epublibre အလုပ်လုပ်နေတာလဲ။ ဤရွေးချယ်စရာများကိုစစ်ဆေးပါ
AUKEY EP T25 နားကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း